DOWNLOAD OPENAL32.DLL MAIMAIMPOANA - DLL - 2019
Fanitsiana ny tranokalan'ny OpenAl32.dll
OpenAl32.dll dia tranomboky iray izay ampahany amin'ny OpenAl, izay, ho setrin'izany, dia interface interface (API) miaraka amin'ny loharanon-tsarimihetsika maimaim-poana. Izy io dia mifantoka amin'ny fiasan'ny 3D-feo ary ahitana fitaovana handaminana ny feo manodidina, miankina amin'ny tontolon'ny zava-misy manodidina amin'ny fampiharana mahazatra, anisan'izany ny lalao ordinatera. Amin'ny ankapobeny, dia mamela ny lalao hahatsikaritra kokoa ny lalao.
Mizara tsy miankina amin'ny Internet izy ary toy ny rindrambaiko ho an'ny karatra feo, ary koa ampahany amin'ny OpenGL API. Raha heverina izany, ny fahasimbana, ny fanakanana amin'ny antibiotika, na ny tsy fisian'ny tranomboky ao amin'ny rafitra dia mety hitarika amin'ny fandavana ny fampiharana fampiharana multimedia sy lalao, ohatra, CS 1.6, Dirt 3. Amin'ity tranga ity, ny rafitra dia hanome fepetra mifanaraka amin'izany fa tsy misy ny OpenAl32.dll.
Vahaolana amin'ny tsy fisian'ny hadisoana OpenAl32.dll
Ity tranomboky ity dia singa iray amin'ny OpenAl, mba hahafahanao mamerina azy amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny API, na mampiasa sehatra manokana ho an'ity tanjona ity. Azonao atao ihany koa ny mandika ny rakitra tianao ampiasana "Explorer". Tsara ny mandinika ny fomba rehetra amin'ny antsipiriany.
Ny fampiharana dia natao hamahana ny fametrahana ny tranokala DLL.
Rehefa vita ny fametrahana dia manomboka ny rindrambaiko. Midira ao amin'ny sehatry ny fikarohana «OpenAl32.dll» ary tsindrio ny "Manaova fikarohana fichier dll".
Ao amin'ny varavarankely manaraka, kitiho ny tahiry voalohany amin'ny lisitry ny valiny.
Farany, tsindrio "Install".
Fomba 2: Manavao ny OpenAl
Ny safidy manaraka dia ny fanavaozana ny OpenAl manontolo API. Mba hanaovana izany, afeno ao amin'ny loharano ofisialy.
Download OpenAL 1.1 Windows Installer
Sokafy ny horonan-tsarimihetsika voavaky ary hazavao ilay installer. Ao amin'ny varavarankely izay miseho, tsindrio "OK", ka manaiky ny fifanekena momba ny fahazoan-dàlana.
Ny fametrahana ny fametrahana dia alefa, ary aorian'izay dia misy fampandrenesana mifandraika. We press "OK".
Fomba 3: Manamboara solosaina Sound Maps
Ny fomba manaraka dia ny hanavaozana ny mpamily amin'ny fitaovana fanenon'ny solosaina. Anisan'izany ny karatra manokana sy ny raki-peo. Amin'ny tranga voalohany, ny rindrambaiko vaovao dia azo alefa mivantana avy ao amin'ny vohikalan'ilay mpanamboatra karatra feo, ary amin'ny faharoa dia tsy maintsy mifandray amin'ny loharanom-bolan'ny orinasa izay mamoaka ny rindrankajy.
Fametrahana mpamily karatra feo
Afovoany ary apetraho ireo mpamily feo ho an'ny Realtek
Azonao atao koa ny mampiasa ny DriverPack Solution mba hanavaozina sy hampidirana mpamily.
Fomba 4: Tondroy ny OpenAl32.dll
Azo atao ny maka maimaim-poana ny rakitra tianao avy amin'ny Internet ary mametraka izany ao amin'ny ordinatera Windows ilaina.
Ity manaraka ity ny dingana kopia any amin'ny lahatahiry «SysWOW64».
Ny antsipiriany momba ny toerana hametrahana ny antontan-taratasy mifototra amin'ny biraon'ny rafitra miasa dia voasoratra ato amin'ity lahatsoratra ity. Raha tsy manampy ny kopy tsotra dia mila manoratra ny DLL ianao. Alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra hanitsiana ny hadisoana, dia asaina manamarina ny solosaina amin'ny viriosy koa.
https://termotools.com mg.termotools.com © DLL 2019